Baahin: Arbaca, Nov 30, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. R/wassaare Gaas oo dhalleeceeyey weeraro & qaraxyo lala beegsaday fariisinka ciidanka federaalka ee Villa Baydhabo, Muqdisho; 4 dhimasho ah, 8 dhaawac ah oo uu sababay qaraxa Villa Baydhabo; Gen. Dhegabadan ayaan ka waraysanay; Warbixin ku saabsan xaflad lagu soo gunaanaday colaadii Garsoor oo lagu qabtay Garowe; Madaxda & Issimada Puntland oo khudbado ka jeediyey. – Radio Daljir
Nofeembar 30, 2011 12:00 b 0
Bilayska Buuhoodle oo xirxiray dhallinyaro ku dhaqaaqay falal amni xumo.